कोरियन ब्योईफ्रेण्डलाई भेट्न एयरपोर्ट पुगिन् गँगा, संगै आएकि आमाको आँखाबाट रोकिएनन् आँशु! (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > कोरियन ब्योईफ्रेण्डलाई भेट्न एयरपोर्ट पुगिन् गँगा, संगै आएकि आमाको आँखाबाट रोकिएनन् आँशु! (भिडियो सहित)
admin December 23, 2020 भिडियो, समाचार	0
सधैं भ्रमको संसारमा आफ्नो बोयफ्रेण्डलाई भेट्न भनी एयरर्पोट जाने गंगा यतिबेला पनि एयरर्पोटमै कोरियन बोयफ्रेण्डलाई भेट्न भनि गएकी छन् । छोरीलाई एक्लै छोड्न मिल्दैन भन्दै गंगाको साथमा उनकी आमा पनि एयरर्पोटमै पुगेकी छन् । यो पटक पनि गंगाले आफ्नो भ्रमको संसारमा रहेको बोयफ्रेण्डलाई भेट्दिनन् । जब उनले यस पटक पनि बोयफ्रेण्डलाई भेटिनन् तब गंगाले के भन्छिन् त ? सुनौं उनैको भनाई ।